Uvavanyo lwebhetri: iOS 13.5.1 vs iOS 13.6 | IPhone iindaba
Uvavanyo lwebhetri: iOS 13.5.1 vs iOS 13.6
UIgnacio Sala | | iOS 13
Kukhululo ngalunye olutsha lohlaziyo, abasebenzisi abaninzi bakhawuleza bahlaziye izixhobo zabo ukujonga kuqala ukuba zeziphi izinto ezintsha ezivezwe ngu-Apple, into endingayicebisi ngokukodwa, kuba akubizi nto ukulinda iiyure ezimbalwa ukuze ubone ukuba ngaba umsebenzisi uthatha isigqibo ngalo mbandela.
Uhlaziyo lwamva nje olukhoyo kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad yi-iOS 13.6, uhlaziyo olukhutshwe embindini wale veki iphelileyo kwaye sele ludlulisile kuvavanyo lwabafana kwiAppleBytes. Ngeli thuba, uyifakile le nguqulo intsha ye-iOS kwi-iPhone SE, i-iPhone 6s, i-iPhone 7, i-iPhone 8, i-iPhone XR, i-iPhone 11 kunye ne-iPhone SE 2020.
Njengazo zonke iimvavanyo ezenziwa ngaba bafana, usetyenziso olusetyenziswe eGeekbench. Olu vavanyo lwenziwa kwiintsuku ezi-4 emva kofakelo, xa inkqubo yokusebenza ihleli phantsi kunye nokusetyenziswa kwebhetri kuqhelekile kwakhona. Yintoni imiphumo: embi.
Zonke iimodeli ezithathe inxaxheba kolu vavanyo zifumene ixesha lokubaleka elibi ngakumbi kuneenguqulelo zangaphambili. Ngamaxesha athile, isixhobo esinqabileyo siye sabona ukuba bancitshisiwe njani ubomi bebhetri xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili, kodwa inye okanye iimodeli ezimbini, ayizizo zonke ezibe yinxalenye yolu vavanyo.
IAppleBytes ihlala ilinda phakathi kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-4 ukwenza olu vavanyo lokusetyenziswa kwebhetri, ke ngeli xesha, ngaphandle kokuba iApple ichukumise into engakhange ithethe, akukho sizathu sokusebenzisa inguqulelo yamvanje ye-iOS ekhoyo ngoku, i-iOS 13.6, igqithile kuneenguqulelo zangaphambili.
Ngaba unengxaki yebhetri nge-iOS 13.6? Kwezinye iiforamu zenkxaso ndizifundile izimvo ezingaqhelekanga, kodwa akukho nto imele oko. Masibone ukuba ngethamsanqa elithile, abafana abakwiAppleBytes benza olu vavanyo lunye kwakhona ukubona ukuba ingxaki yokusetyenziswa kwebhetri kungenxa yenkqubo yokusebenza eyayingekahlali ngokuchanekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » Uvavanyo lwebhetri: iOS 13.5.1 vs iOS 13.6
UJose Perez sitsho
Ndine-iPhone 11 Pro endiyisebenzisa ngendlela efanayo naleyo ndandiyithenga ngayo, andingomdlali weqonga kodwa ukuba ndikhangela kwaye ndithumele ii-imeyile zikaWhatsApp kuTwitter nayo yonke into endiyenzayo kwimihla yam, namhlanje ibihlala imini yonke ngo-07: 00 kusasa. - 23:00 iiyure nge 35% ngoku ngu 17:00 kwaye ndine 30%
Phendula kuJosé Pérez
yenzayo Iinyanga ze12
Kwenzeka into efanayo kum, ndilahlekelwe ziibhetri ezininzi ze-ios ezivela kumzi mveliso kwi-pro max yam kwi-ios 13.6, ndilahlekelwe ziiyure ezi-3 zobomi bebhetri.
Oko ndihlaziye i-iPhone 6 yam kuhlobo lwamva nje, ibhetri ihlala isiqingatha
Ihlengethwa hs sitsho
Ndiyabulela ukulunga kwam, khange ndibenangxaki ngebhetri
Phendula kuDelfín hs
Umthunywa we-iOS ngoku uvumela ukwabelana kwescreen kunye nohlaziyo lwamva nje
I-Ajax, ukhuseleko ngaphandle kwamacingo kunye nomlinganiso wakho